Wasiirka Qorsheynta XFS iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray magaaladda Garoowe | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Wasiirka Qorsheynta XFS iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray magaaladda Garoowe
Muqdisho (SNTV)- Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaaladda Garoowe ee Xarunta dawlad goboleedka Puntland, waxaana halkaasi si diirran ugu soo dhaweeyey Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland.
Ujjeedada Socdaalka Wafdiga Wasiirka Qorsheynta XFS uu hoggaaminayo ayaa ah sddii wadatashi ku aadan Wareegga koowaad ee Qorshaha Horumairnta Qaranka ee Sagaalaad loola yeelan lahaa hay’adaha Dawlad gobaleedka Puntland, Ururadda Bulshada rayidka ah, ganacsatada iyo laanta sharci dejinta.
Wasiiru dawlaha Wasaaradda Qorsheynta Dawlad Gobaleedka Puntland Cabdiraxmaan Caydiid oo warbaahinta kula hadlay qeybta nasashada garoonka ayaa sheegay in maalmaha ay joogan wafdiga uu hoggaaminayo Wasiirka Qorsheynta ay wadatashi iyo xog wareysi la yeelan doonaan Dawlad goboleedka Puntland iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada, si loo adkeeyo hannaanka dowladnimmada Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee socdaalkoodu in ay tahay siddii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad gobaleedka Puntland iyo sidoo kale wada-tahsiga Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Sagaalaad oo lala yeelanayo Hay’adaha dawladda iyo Bulshada qeybaheeda kala duwan.
“Socdaalkeena waxuu ku saabsan yahay siddii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda dhexe iyo Dowlad gobaleedka Puntland, iyo wadatashi inaa ka sameyno Qorshaha horumarinta Qaranka ee Sagaalaad oo qoraalkiisa koowaad bilowday siddii Puntland qeyb-tooda ay ugu geysan lahaayeen, waxyaabaha aan doonayno waa inaan ka wada hadalno arrimaha aan soo sheegnay, waana boggaadinayaa shaqada wanaagsan ee ay qabteen. “Ayuu yiri Wasiirka Qorsheynta XFS.
Waxaa lagu wadaa in maalinta berri ah magaaladda Garoowe lagu daahfuro wada-tashigga Qorshaha horumarinta Qaranka ee Sagaalaad, kaasi oo saldhig u ah geeddi socodka Deyn cafiska Soomaaliya iyo yarenta Saboolnimada, si dalkeenu u gaaro Horumar.
Previous articleSoomaaliya oo shir looga hadlayo muran goboleedka Saxaraha uga qeybgashay Morocco
Next articleWasiirka Cadaaladda oo Muqdisho ka furay Shir looga hadlayo ka hortaga musuqa iyo hormarinta howlaha dowladda